Indlela yokuchonga iintlanzi ezigulayo Ngeentlanzi
Uninzi lweentlanzi esinazo kwi-aquarium unokuxela ukuba iyagula nje umbono nokuziphatha okufanayo. Nangona kamva kukho iimpawu ezicacileyo, esichongwa sesi sifo. Xa sithetha ngentlanzi egulayo kungenxa yokuba siqaphele ukuba iyitshintshile indlela yayo yokuziphatha, kwaye ukusuka apho, siye phambili Chonga isifo ukubuyisela impilo yentlanzi.
Umbala, indlela yokudada, i-voracity okanye ukungabikho kwayo, ukurhoxa, amaphiko asongelweyo, ukubekwa ecaleni kolusu, ukudada ngokungaqhelekanga, ukumisela, akuqhelekanga kwaye ngenxa yoko kufuneka silungise, ngokwe Iintlanzi.
Kukho isimilo esingaqhelekanga esibonisa ukuba intlanzi iyagula kwaye kunjalo eziqhelekileyo kuzo zonke iintlanzi. Ukwalelwa ekutyeni okuqhelekileyo, amaphiko asongelweyo, ukuqubha okungaqhelekanga okanye ukubekwa wedwa kwiimbombo ze-aquarium, ukuhamba ngapha nangapha, ukukhuhla kumatye, izinto okanye umgangatho we-aquarium, ukuphefumla okungalawulekiyo kunye nokungabikho kwempendulo xa sizama ukubabamba ngomnatha.
Xa intlanzi itshintsha umbalaUkuba olu tshintsho luyenzeka asifanelanga ukuba nexhala, kodwa ukuba luyaqhubeka siyakuthetha ngesifo kwaye sijonge iintlanzi ukuze silubhaqe. Singathetha nge-anemia, kuba ivelisa umbala kwiintlanzi, nokuba kungenxa yokungabikho kweoksijini kwi-aquarium okanye ukukhanya okungalunganga kwenkqubo yayo okanye i-parasite ehleli esikhumbeni.
Ukuba intlanzi inayo isisu esitshonileyoSingathetha ngokungondleki, iirickets kunye nesifo sephepha. A isisu esiqhuma Isenokuba kukuqunjelwa kwamathumbu, i-ascites, okanye i-dropsy. Izifo ezibini zokugqibela zinobuzaza, kuba ziveliswa kukuhlaselwa ziibhaktheriya, maxa wambi okunxulunyaniswa ne-myxobacteria, eyosulela kakhulu ekunzima ukuyinyanga.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa kukho nakuphi na ukungalunganga esikubonayo kwintlanzi kufuneka yahlule kwezinye iintlanzi de ube uyazi isifo sakho kwaye usinyange esi sifo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Ungayichonga njani intlanzi egulayo